Doorashadii UNWTO ayaa Alain St. Ange ka dhigtay Milyaneer
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » Doorashadii UNWTO ayaa Alain St. Ange ka dhigtay Milyaneer
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Waajib ah • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Alain St. Ange wuxuu wasiirkiisu ka helay oggolaansho ah inuu ka qaybgalo Doorashada UNWTO
Dhammaantood waxay ku bilaabmeen xusuus farxad leh Maarso 23, 2017 magaalada Berlin goob ITB Function ah, markii Wasiirka Dalxiiska ee Seychelles Loustau-Lalanne uu taageeray Wasiirkii hore St.Ange inuu noqdo Musharraxa Xoghayaha Guud ee UNWTO iyadoo uu goob joog ka ahaa Taleb Rifai oo xilka ka degaya. UNWTO SG.
Qeyb weyn oo adduunka ah ayaa ku mideysan fahamka Doorashada UNWTO ee Seretary ee 2017 ma aysan soo gabagabeynin sidii ay ahaan lahayd. Khiyaano, musuqmaasuq, wax isdabamarin iyo waxyaabo kaloo badan ayaa la soo sheegay intii lagu guda jiray hawsha xaqiijinta booska hadda ee Xoghayaha Guud ee UNWTO Zurab Pololikashvili
Mid ka mid ah musharraxiintii xilligaas u tartamaysay jagadaas waxaa ka mid ahaa Mr. Alain St. Ange. Uma qaadan wixii ku dhacay sidii la siiyay. 4 sano ka dib maxkamadda racfaanka ugu sareysa ee dalkiisa Seychelles ayaa siisay 7 Milyan oo Seychelles Rupies ah ama ku dhowaad $ 526,000 oo magdhow ah Khamiistii.
Dad badan oo adduunka ah ayaa hadda isweydiiya sida UNWTO ay uga sii gudbi lahayd dhibaatadan COVID iyada oo hoggaamiye kale ka masuul yahay?
The UNWTO waxaa hubaal ah inay noqon doonto mid hufan, saxaafad ku habboon, una furnaan doonta ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo dhammaan dowladaha xubnaha ka ah wakaaladda ku xiran QM.
St. Ange ayaa dacwad ka gudbisay Seychelles bishii Oktoobar 2017 ka dib markii ay dawladdiisa u qalmin inuu ka qaybgalo doorashada UNWTO. Waxay ku faraxday 2 maalmood ka hor doorashada intii lagu jiray shirkii Golaha Fulinta ee UNWTO ee Madrid. Waxay ahayd lama filaan waxayna ahayd dhib weyn oo u soo hoyatay Murashax St. Ange, taageerayaashiisa, iyo Xoghayihii hore Rifai iyo kuwo kale oo badan.
Wuxuu jeediyay khudbad qiiro leh doorashada ka hor looma oggolaan inuu mar dambe tartamo.
Khudbad Qiiro leh oo uu Alain St Ange ka jeediyay Golaha Fulinta ee UNWTO sannadkii 2017 -kii kadib markii laga reebay inuu noqdo Musharraxa UNWTO
Alain wuxuu jecel yahay saxaafadda, wuxuu jecel yahay dadka wuxuuna taageero weyn u yahay safarka gaarka ah iyo warshadaha dalxiiska. Markii uu ahaa wasiirka dalxiiska ee Seychelles wuxuu bilaabay Victoria Carnival, dhacdo keentay carnivals and visitors from all parts of the world to this state jasiiradda yar. Carnivals, oo laga soo qaaday Trinidad, Nottingham, Cologne ilaa Rio de Janeiro ee Seychelles ayaa wali ka hadlaya.
Nasiib darro, St. Ange marnaba ma helin fursad ay ugu codeeyaan waddamada xubnaha ka ah UNWTO.
Afrika waxay qaadanaysay dhammaadka gaaban ee usha waxay ahayd walaac weyn intii lagu jiray doorashada, waxayna isu beddeshay xaqiiqo murugo leh sida dad badani qabaan.
Sannadkii 2017-kii, laba hoggaamiye oo Afrikaan ah ayaa isku dayayay inay Afrika geeyaan masraxa dalxiiska adduunka: Dr. Walter Mzembi, oo ahaa wasiirkii ugu waqtiga dheeraa ee dalxiiska Afrika xilligaas ka yimid Zimbabwe, iyo Alain St.Ange oo u dhashay Seychelles.
Midowga Afrika ayaa u ansixiyay Dr. Mzembi inuu noqdo musharraxa Afrika, taas oo ay xaqiijisay Seychelles sidoo kale xilligaas. Iyada oo ay jiraan laba murashax oo Afrikaan ah, fursadaha Afrika ee ah in midkood loo xilsaaro Xoghaye Guud ayaa noqotay caqabad dhab ah.
Dalka Zimbabwe ee uu ka taliyo Madaxweyne Mugabe ayaa Midowga Afrika ku riixay inay ku khasbaan Seychelles si aysan u ogolaan in Alain St.Ange uu tartamo. Cadaadiska saaran Seychelles wuxuu ahaa mid aad u weyn wuxuuna halis geliyay cunaqabatayntii Afrika.
Dowladda Seychelles waxay bixisay daqiiqado ka hor doorashada waxayna si xoog leh ugala baxday St.Ange doorashada.
Tani waxay ceeb weyn ku ahayd Murashax St. Ange, laakiin sidoo kale UNWTO, iyo hufnaanta hannaanka doorashada. Nasiib darrose, tani waxay ahayd mid ka mid ah dhibaatooyin badan oo ah horumaro naxdin leh oo aakhirkii u xaqiijiyay murashaxa Georgia inuu noqdo Xoghayaha Guud ee Golaha Guud ee UNWTO ee Chengdu, Shiinaha.
Afrika waxay lahayd usha gaagaaban tan iyo bilowgii, waxay ka bilaabatay 2017 markay ahayd eTurboNews ayuu qoray: Wax baa uraya Madrid.
Ugu dambayntii, Mzembi ayaa ka galay booska labaad oo uu ka adkaaday Zurab Pololikashvili. Daabacaadani waxay ka warramaysay Zurab oo ku ciyaaraya ciyaar xun oo leh fadli iyo ballanqaadyo shaki leh si uu u sugo codadkiisa.
Alain St.Ange wuxuu cadeynayaa raadkiisa u gaarka ah jagada Xoghayaha Guud ee UNWTO
Alain St.Ange wuxuu dareemay in dowladdiisu ay si xun ula dhaqantay weligiisna ma joojin inuu wax ka sheego. Dawladnimadiisii ​​ayuu dacweeyey wuuna guulaystay. Ka dib markii uu ku guuleystay dacwaddiisa racfaan ayaa la gudbiyay haddana wuxuu ku guuleystay xitaa ka weyn. Waxaas oo dhami waxay dhaceen khamiistii, shalay.
Maxkamadda Sare ee Seychelles ayaa maanta (Ogosto 12, 2021) soo saartay xukun lagu taageerayo kiiska wasiirkii hore ee dalxiiska, Alain St.Ange.
Maxay Alain St. Ange u heli doontaa 7 Milyan oo Lacag ah Doorashada UNWTO ee luntay?
St.Ange, oo si hagar la'aan ah ugu ololeeyay jagada oo ay ka soo gaartay khasaare dhaqaale oo aad u weyn intii lagu guda jiray hawsha isagoo isku dayaya in uu iska dhigo xoghayaha guud ee ugu horreeya Afrika ee UNWTO.
Go'aanka ka noqoshada musharraxnimadiisa waxaa qaadatay dowladda Seychelles kadib markii cadaadis xooggan ay saareen Midowga Afrika oo ku hanjabay cunaqabateyn dhaqaale.
Sidaa darteed, madaxweynaha Seychelles, wuxuu baajiyay magacaabistii St.Ange markii uu mar horeba ka qaybgalayay shirka Golaha Fulinta ee UNWTO oo ka dhacay Madrid, 2 maalmood ka hor doorashada.
Ka dib markii St.Ange uu ku soo noqday gurigiisii ​​ayuu aaday maxkamad waxaana xaq u yeeshay Maxkamadda Sare, oo uu guddoominayay garsoore Melchior Vidot, markii lagu abaalmariyay magdhaw dhan Rs164,396.14 sent (qiyaastii US $ 12,366)
Lacagtaan xitaa ma aysan daboolin kharashaadka St.Ange ay gelisay ololaha doorashadaan. Wuxuu faray qareennadiisa inay rafcaan ka qaataan xaddiga magdhowga. Waxa kale oo uu ku daray xanuun, bahdil, iyo dhaawac maskaxeed oo dhacdadu u keentay.
Dhowr sano ka dib, arrinta ayaa ugu dambeyn lagu soo gabagabeeyay Maxkamadda Rafcaanka, oo ah Maxkamadda ugu sarreysa Seychelles. In kasta oo Xeer-ilaaliyaha Guud dalbaday, rafcaan, in kiiska gebi ahaanba la buriyo, St.Ange wuxuu ka qaatay racfaan ka dhan ah tirada.
Wuxuu si qumman u xusay in wadarta lagu bixiyey heerka Maxkamadda Sare ay ku filnayd inay daboosho khidmaddiisii ​​xereynta, laakiin aan wax badan ka qaban magdhowgii badnaa ee uu ku baxay ololihiisii.
Xeer-ilaaliyaha Guud ee rafcaanka ayaa isku dayay, laakiin kuma guuleysan, si uu u codsado in Dowladda lagu hayo heer ka duwan sharciga marka loo eego muwaadin falalka khiyaaliga ah.
Ugu dambayntii, haddii doodoodu guulaysan lahayd, waxay saamayn ku yeelan lahayd in lagu adkeeyo muwaadinku inuu qaado tallaabo madani ah oo ka dhan ah Dawladda. Ahaanshaha mid ka mid ah noociisa ugu horreeya ee awooddeena, kiiska St.Ange maanta wuxuu lahaa saameyn liddi ku ah Xukunka: ballaarinta baaxadda muwaadiniinta si ay uga horyimaadaan go'aannada ay qaateen laanta Fulinta ee Dowladda.
Maxkamadda ayaa shalay abaalmarinta St.Ange ku kordhisay ku dhawaad ​​7 milyan oo rupees, iyadoo si wax ku ool ah u soo celisay inta badan kharashaadkii jeebkiisa ka baxay intii lagu jiray ololihiisii.
Lacagtan waxaa ku jira 1 milyan oo rupees oo waxyeello xagga anshaxa ah, mid ka mid ah lacagaha ugu sarreeya ee lagu bixin karo awooddeena waxyeellada aan lacagta ahayn ilaa maanta.
Tani shaki la'aan waxay u noqon doontaa halbeeg rajo leh kuwa sheeganaya inay hore ugu socdaan sababaha ficil ee la midka ah.
Mr. St.Ange ayaa la arkay, si la fahmi karo, isagoo ka tagaya maxkamadda shalay isagoo niyad wanaagsan ka dib afar sano oo uu la dagaallamayay arrinta si aan loo meel dayin, oo ay weheliyaan kooxdiisa farxadda leh ee Qareennada Seychellois, oo ka kooban Mr. Kieran Shah, MrsMichelle St.Ange-Ebrahim, iyo Mr. Frank Elizabeth.
Gobolka waxaa matalayay Mr. Stephan Knights. In kasta oo Mr. St.Ange uu si wanaagsan ula falgalay, sidii caadada u ahayd, saxaafadda la soo ururiyay, ma jirin wax hadal ah oo ka soo baxay Xeer-ilaaliyaha Guud.